DAAWO VIDEO:DEG DEG Ilhan Cumar oo dil Ka Bad Baadey Trump oo Raali Galiyey Isna Badaley
April 16, 2019 marqaan Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 3
Waa gabar yar oogeesiyad ah duqaana wuxuu qabaa cudurislaweynaan ahoouumooday inuu dalkakaleeyahay dadkau dhashay Cimrigiisii wa dhamaaday ee siduu u khaylinaayooou dagaalamaayowadnahaa fariisandoonoee hala sugo
Ilhaan hacabsanin allaa kula jira kuwa kuu hanjabaayo caqligoodaa intaas ku eg qofkii alle dilo ayaa dhinta.
Anigu waxaan aaminsanahay oo aan aad uga xumahay in gabadheenan Soomaaliyeed si qaldan loogu adeegsanayo loollanka ka dhex aloosan darafyada midigta iyo bidixda kala xiga ee siyaasadda Mareykanka. Waxaa aanu shaki ku jirin in ay siyaasadda Mareykanku su xun u qasantay oo kuwa maanka furani ee ay gorodda isku la jiraan kuwa maanka qufulan ee xagjirnimada ku mintidaya.
Qas kasta oo Mareykanka ka jira anigu nafar Soomaaliyeed, gaar ahaan ruux daddig ah, in ay ku dhex milmaan loollankan qaawan ee gaalada ka dhex qarxay. Gaaladani iyaga ayaa is ah oo qaaraddan awoodda ku leh. Ilhaan Cumar waxaa kun jeer ku habboonayd in aanay sidan isu muujinin oo jagadaas uu Rabbi ku galladay si qarsoon oo fariidnimo ay ku dheehan tahay uga faa’iideyso dalkeedan weli qabyada ah iyo geyiyada kale ee Soomaaliyeed.
Diinteenu xataa haweenka waa ay ka kafaala qaadday in ay bulshada ka dhex muujiyaan oo il xun lagu eego waayo waa aasaaski bulshada iyo hooyooyin xurmaddoodu uga dhex sugan tahay bulshadooda gudaheeda. Ilhaan talo xumo ayaa qaadday oo in laga nasteexeeyo ayay mudan tahay xaqiiqdii. Shu’uumo aan khuseynin oo aanay dani ugu jirin ayay isku dhex tuurtay. Waa wax aad looga xumaado runtii.